PSJTV | गणतन्त्र स्तम्भ किन बनेन ?
काठमाडौं: देशमा गणतन्त्र स्थापनाको प्रतीकका रुपमा निर्माण गर्न भनी नक्साको ढाँचा तयार गरिएको गणतन्त्र स्तम्भ अझै बन्ने नबन्ने अन्योलमा छ । स्तम्भ निर्माणका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले बल्खुस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयसँगै जोडिएको काठमाडौं महानगरपालिका–१४, गांखेलको ६० रोपनी जग्गा दिने सहमति गरेको छ ।
सहमतिबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी स्तम्भका नाममा सो जग्गा छुट्याइसकेको छ । स्तम्भको नक्साको ढाँचा सबै तयार भए पनि बजेटको सुनिश्चित नहुँदा स्तम्भ निर्माण अन्योलमा रहेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले बताएको छ ।
स्तम्भ निर्माण गर्न रू. १ अर्ब ८७ करोड लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको विभागका वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनीयर मचाकाजी महर्जनले जानकारी दिए । स्तम्भ निर्मााणका लागि जग्गा विवाद भएको भनी केही पक्षले प्रचार गरे पनि विवाद नरहेको काठमाडौं महानगरपालिका–१४ का अध्यक्ष शोभा सापकोटाले बताइन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुअघि सर्वदलीय एवम् सर्वपक्षीय सहमतिका आधारमा सो स्थान छनोट गरिएको उनले जानकारी दिइन् । स्तम्भ ९४ मिटर उचाइको हुने डिजाइन भएको छ । यसअघि १५० मिटर अग्लो स्तम्भ निर्माण गर्ने तयारी गरिएकामा ढाँचा परिवर्तन गरी ९४ मिटरमा झारिएको वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनीयर महर्जनले बताए ।
स्तम्भसँगै निर्माण गरिएको गणतन्त्र स्मारक भने निर्माण भइसकेको छ । स्मारक गणतन्त्र दिवसका दिन यही जेठ १५ गते बेलुकी ६ बजे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गर्नुहुने कार्यक्रम छ । नारायणहिटी दरबारको उत्तरपूर्वी भागमा गणतन्त्र स्थापनाको प्रतीकका रुपमा स्मारक निर्माण भएको छ ।
भारतसँग सीमा जोडिएका दार्चुलाका सीमा नाका ४८ घण्टाका लागि बन्द हुने भएका छन्। भारतमा ग्राम पञ्चायत निर्वाचन हुने भएकाले पीथौरागढ जिल्लासँग जोडिएका जिल्लाका सबै नाका बन्द हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी शङ्करबहादुर ...